၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် Pontianak ရှိအငယ်တန်းအထက်တန်းကျောင်းသားများအပေါ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများဖော်ပြမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှု - သင့် ဦး နှောက်သည်သင့်ဆံပင်ပေါ်တွင်
hubs-အာရှ9မရှိ။2(2010) ။
Euis Supriati, စန်ဒရာ Fikawati
ဆယ်ကျော်သက်မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးဧရိယာထဲမှာအားနည်းချက်အုပ်စုတစ်စုဖြစ်ပါတယ်။ ဤကာလအတွင်းအသစ်သောအရာကြိုးစားလေ့လာစူးစမ်းဖို့ပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒအားဖြင့်မှတ်သားထားသည်။ ညစ်ညမ်းမြင့်မားသောအန္တရာယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဆီသို့ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုသြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်သည့်တစ်ဦးအလတ်စားဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့သောမလိုချင်တဲ့ကိုယ်ဝန်အဖြစ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှု, မလုံခြုံကိုယ်ဝန်ဖျက်ချ, လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများနှင့် HIV-AIDS ရောဂါရှိနိုင်တယ်လို့ကတည်းကညစ်ညမ်းပစ္စည်းများမှအဆိုပါထိတွေ့ဆယ်ကျော်သက်အကြားကြီးမားသောပြဿနာတရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည် Cross-Section လေ့လာမှုညစ်ညမ်းထိတွေ့မှုအမျိုးမျိုး, ညစ်ညမ်းထိတွေ့မှု၏သက်ရောက်မှုကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ကောက်ယူနှင့်အချက်များအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသြဇာလွှမ်းမိုးခဲ့သည်။
လေ့လာမှုဒီဇင်ဘာလ 2008 ကနေဇန်နဝါရီလ 395 မှ 2007 ဖြေဆိုသူနှင့်အတူ 2008 အတွက် Pontianak ခရိုင်ငါးခုပြည်နယ်အငယ်တန်းအထက်တန်းကျောင်းမှာကောက်ယူခဲ့သည်။ အဆိုပါရလဒ် 83.3% မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ညစ်ညမ်းထိတွေ့ခဲ့ပြီးသူတို့ထဲက 79.5% ညစ်ညမ်းထိတွေ့မှု၏ဆိုးကျိုးများကြုံတွေ့ခဲ့ကွောငျးပြသထားတယ်။
ညစ်ညမ်းများ၏သက်ရောက်မှုများကြုံတွေ့ခံစားသူကို 19.8% တုံ့ပြန်သည့်စွဲလမ်းအဆင့်တွင်ခဲ့သည်။ စွဲလမ်းအဆင့်တွင်သူတို့၏အမျိုးအ 69.2% တုံ့ပြန်တင်းမာမှုအဆင့်တွင်ခဲ့သည်။ တင်းမာမှုလျှော့ချဇာတ်စင်၏ 61.1% တုံ့ပြန် desensitization ဇာတ်စင်၌ရှိ၏နှင့် desensitization ၏ 31.8% တုံ့ပြန်လုပ်ရပ်ထွက်အဆင့်တွင်ခဲ့သည်။ Multivariate ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြောင့်ကျားမကျောင်းတွင် (အထီး), တန်း (တတိယ), ထိတွေ့မှု၏အရှည် (မကြာသေးခင်က) နှင့်ထိတွေ့မှု၏ကြိမ်နှုန်း (မကြာခဏ) ဖြစ်ပါသည်, ညစ်ညမ်းထိတွေ့မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုမှသိသိသာသာဆက်ဆံရေးမျိုးရှိသည်လေးခု variable တွေကိုရှိပြသထားတယ်။
။ အဆိုပါခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလည်းညစ်ညမ်း (မကြာခဏ) ၏ကြိမ်နှုန်း 5.02 ၏ & Odds အချိုး (95-1.39 18.09% CI) နဲ့မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကြားတွင်ညစ်ညမ်းထိတွေ့မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောအများဆုံးကြီးစိုးအချက်ကြောင်းပြသ ဒါဟာပရော်ဖက်ရှင်နယ်လမ်းအတွက်သတင်းအချက်အလက်များကိုအကြံပြုနှင့်လက်ျာအုပ်စုပစ်မှတ်ထားလျက်ရှိ၏ ကျောင်းကအတွင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမှတဆင့်ကြိုတင်ကာကွယ်အားထုတ်မှုတိုးတက်စေရန်နှင့်အပြုသဘောလုပ်ရပ်ထွက်အဆင့်တွင်သူတို့အား align အဖြစ်ထပ်မံလေ့လာရန်။
keywords: မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်, ထိတွေ့မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှု, ညစ်ညမ်း
ဒီလေ့လာမှုကမြီးကောင်ပေါက်များ၏အဖြစ်အများအပြား 83.3 အဖြစ်% Pontianak စီးတီးရှိ SMPN တွေ့ရှိခဲ့ဒေတာများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်အဓိပ္ပါယ်ရှင်းလင်းချက်ညစ်ညမ်းနှင့်အတူထိတွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မြီးကောင်ပေါက်ကနေညစ်ညမ်းသူတို့ကို၏ 79.5% ညစ်ညမ်းမှထိတွေ့မှု၏ဆိုးကျိုးများကြုံတွေ့ခဲ့ကြသကဲ့သို့အများအပြားထိတွေ့ SMPN ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသည်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်ဆန္ဒကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ဟုသင့်လျော်သောလူမှုလေ့လာရေးသီအိုရီကိုရှင်းပြနိုင်သည်။ (Schramm & Roberts, 1971) အမျိုးမျိုးသောမီဒီယာများမှဖော်ပြသောလေ့လာတွေ့ရှိချက်များ၏လိင်အကြောင်းလေ့လာနိုင်သည်။ အသေးစိတ်အားဖြင့်, ဆယ်ကျော်သက်များအပြင်ဆယ်ကျော်သက်လည်း, ဤအပြုအမူလှုံ့ဆျောမှုနှင့်ရည်ရွယ်ချက်တို့သည်အပြန်အလှန်နောက်ကွယ်မှအဖြစ်ကောင်းစွာကဲ့သို့သောအပြုအမူအတွင်းအပြန်အလှန်သောသူတို့အဘို့အကျိုးဆက်များဖြစ်ပေါ်ထားတဲ့အတွက်အခြေအနေတွင်အကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူနေကြပါတယ်အတွက်လိင်အပြုအမူများ၏ယန္တရားများကိုစောငျ့ရှောကျပါလိမ့်မယ်။ ဆယ်ကျော်သက်များစိတ်ဝင်စားမှု၊ အာဏာနှင့်ပုံဖော်ခြင်း၊ အခြားနည်းလမ်းများဖြင့်ဆက်ဆံခြင်းသို့မဟုတ်ဖော်ထုတ်နိုင်သောဇာတ်ကောင်များကိုဆယ်ကျော်သက်အဖြစ်ဖော်ပြသည့်အခါညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကိုမက်ဆေ့ခ်ျများ၌ဖုံးကွယ်ထားသည်။
ညစ်ညမ်းထို့နောက်ဖြစ်ပေါ်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုဟာဆယ်ကျော်သက်သူ့ဟာသူအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးလာဆွဖို့ပို့ဆောင်ပေးသောအမူအကျင့်အမူအကျင့်ဖြစ်ပါသည်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒလူတစ်ဦးကိုလှုံ့ဆော်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ ဒါဟာညစ်ညမ်းဇီဝကမ္မနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွ (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွဆန့်ကျင်အဖြစ်စနစ်အာရုံကြော၏ activation) ထုတ်လုပ်နိုင်မည့်, အဓိကအားဖြင့်ချက်ချင်းအကျိုးသက်ရောက်အာရုံစိုက်နေကြသည် Thornburgh နှင့်ဟားဘတ် (1982) အတွက် Zillmann (2002) အရလှုံ့ဆော်မှု၏သီအိုရီနှင့်အတူထပ်တူပြုခြင်း၌တည်ရှိ၏ နှင့်ဆွ၏တိုးမြှင့်အဆင့်ဆင့်ဖွယ်ရှိအပြုအမူအချို့ကိုပုံစံထုတ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ မဂ္ဂဇင်းများ၊ စာအုပ်များ၊ ဖယောင်းစက္ကူများကဲ့သို့သောပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသောမီဒီယာများမှပုံမှန်အားဖြင့်လှုံ့ဆော်သည့်ရုပ်ပုံများဖြစ်သော“ အပြာရုပ်ပုံစာပေ” (သို့) လိင်မှုဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောပစ္စည်းများ (SEM) ဟုလည်းခေါ်သည်။ စိတ်ကူးစိတ်သန်းကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ပုံမှန်အတိုင်းပုံဆွဲ (ဆယ်ကျော်သက်ပုံပြင်များအင်ဒိုနီးရှား, ထက်
ညစ်ညမ်းမှထိတွေ့မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုညစ်ညမ်းမက်ဆေ့ခ်ျများကပါးခံရဖို့ရလဒ်ကိုတစ်ပုံစံဆက်သွယ်ရေး၏အဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ညစ်ညမ်းအကြောင်းကိုသဘောထားကိုအတွက်အပြောင်းအလဲများ, အပြုအမူများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အမြင်ညစ်ညမ်းဆန့်ကျင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအမြင်ဆယ်ကျော်သက်နှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ပုံစံကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများဖြစ်ပါတယ်။ မော်ဒယ်လင်းသီအိုရီအရသူတစ်ဦးဦးကိုအလိုအလျောက်သူဟာကဤသို့လူတို့ခံစားချက်တွေကိုနှင့်အတူစာနာလိမ့်မယ်နဲ့သူ့ရဲ့အပြုအမူ (Widjaja, 2000) ကိုတုပဖို့ပါလိမ့်မယ်။ ညစ်ညမ်းမှထိတွေ့မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ဦးတည်းညစ်ညမ်းမယ့်အသိပညာသို့သော်ရှုထောင့်နှင့်ပြုမူရန်ပင်စိတ်သဘောထား affective ဖို့လည်းတွေ့ကြုံတတ်၏။ ညစ်ညမ်းသတိရှိရှိသို့မဟုတ်မသိစိတ်, အထူးသဖြင့်လိင်၏စည်းကမ်းချက်များ၌နေ့စဉ်ခုနှစ်တွင်အငယ်တန်းအထက်တန်းကျောင်းကျောင်းသား 52 (19.78%) အဖြစ်အဖြစ်အများအပြားကဒီလေ့လာမှုပြပွဲ၏ရလဒ်များကိုသဘောထားအမြင်များနှင့်ဆယ်ကျော်သက်ဘဝတည်းဟူသောအပြုအမူကိုပြောင်းလဲထားပါတယ်, ပုံသဏ္ဍာန်အမူအကျင့်လုပ်ဖို့ဆယ်ကျော်သက်ထိခိုကျနိုငျ Pontianak စီးတီးညစ်ညမ်းမှထိတွေ့မှု၏သက်ရောက်မှုဇာတ်စင်စွဲပေါ်မှာကြုံတွေ့ခဲ့သည်။ Cline (1986) တစ်စုံတစ်ဦးကညစ်ညမ်းပစ္စည်း likes တစ်ချိန်ကထို့နောက်သူ addictive မည်ပင်ပစ္စည်းရဖို့အမြဲလိုခငျြကြိုးစားပါလိမ့်မည်ကြောင်းဖော်ပြထားတယ်။ ညစ်ညမ်းပစ္စည်းကပိုမကြာခဏတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေမှတဆင့်တပ်မက်သောစိတ် / လိင်များလွှတ်ပေးရေးသဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွသို့မဟုတ် aphrodisiac သက်ရောက်မှု (တပ်မက်သောစိတ်ကိုလှုံ့ဆော်ကြောင်းတ္ထုများ) ၏အင်အားစုပေးမြင်နိုင်သည်။ လူမှုသင်ယူမှုသီအိုရီဖြစ်ပေါ်ကြောင်းလေ့လာသူအပေါ်သက်ရောက်မှုတစ်တပ်မက်လိုချင်သောအမူအကျင့်ဖြစ်လိမ့်မည်ရှိရာတုံ့ပြန်မှုပံ့ပိုး, အကြိမ်ရေအတွက် (Bandura, Thornburgh နှင့်ဟားဘတ်ထဲမှာ 1971, 2002) တိုးတကျခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားသည်။
သဘောထားကိုသို့မဟုတ်အပြုအမူအတွက်လာမယ့်အပြောင်းအလဲတင်းမာမှုသည်။ အဆိုပါရလဒ်များဇာတ်စင်တင်းမာမှု / တိုးချဲ့လိုအပ်ချက်များကိုစွဲနေသော 36 မြီးကောင်ပေါက်များ၏ 69.2 ကလူ (52%) ပြသခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းလောင်အားလုံးဤအချိန်ပြီးနောက်, ချိတ်အလိုတော်နေသောဆယ်ကျော်သက်, လေးလံဖြစ်သောလိင်ပစ္စည်းဘို့လိုအပ်ကြောင်းတစ်ခုတိုးကြုံတွေ့ပိုပြီးရှင်းလင်းပြတ်သားစွာယခင်ကလောင်ထက်ပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားနှင့်ပိုပြီးပုံမှန်မဟုတ်ဘဲစူးနေတယ်။ ဝယ်လိုအားအတွက်ဒီတိုးအရေအတွက်၏စည်းကမ်းချက်များ၌မဖြစ်ပေမယ့်ပိုမိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖြစ်သောအထူးသဖြင့်အရည်အသွေး, ထို့နောက်သူကပိုပြီးစိတ်ကျေနပ်မှုဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ သူကကိုယ်လုံးတီးအမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ပုံရိပ်ကိုစောင့်ကြည့်အလုံအလောက်ကျေနပ်မှုရှိခဲ့ပါလျှင်မီ, ထို့နောက်လိင်မြင်ကွင်းတစ်ခုပါဝင်သောရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုချင်တယ်။ ပြီးတာနဲ့ပြည့်နှက်သူကလိင်မြင်ကွင်းတစ်ခုတခါတရံသူမြင်ရသောထက်ပိုရိုင်းများနှင့်ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲစူးနေတယ်ဖြစ်ကြောင်းကွဲပြားခြားနားသောသူတို့ကိုမကြည့်ဖို့လိုသည်။ ရလဒ်တစ်ခုအနေဖြင့် Zillman & Bryant (1982, Thornburgh & Herbert, 2002) တွင်ဖော်ပြထားသည်။ တစ်စုံတစ် ဦး သည်ထပ်ခါတလဲလဲညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများနှင့်ထိတွေ့မိသောအခါ၎င်းတို့သည်လိင်မှုဆိုင်ရာအမြင်များကိုလွဲမှားစွာမြင်တွေ့နိုင်သည့်အလားအလာရှိကြောင်းပြသနိုင်ပြီး၊ ခဲယဉ်းခြင်းနှင့်ပုံပျက်အမျိုးအစားများ။
desensitization ၏နောက်တစ်နေ့ဇာတ်စင် 22 ကလူ (61.11%) အဆင့်တွင်တင်းမာမှုကြုံနေရသူကို 36 လူမြိုးမှဆယ်ကျော်သက်များကတွေ့ကြုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအဆင့်မှာမညီကြောင်းခဲ့သောလိင်ပစ္စည်း, အကျင့်ပျက်နှင့်တဖြည်းဖြည်းပိုရှည်ကနောက်တဖန်အာရုံမခံစားနိုင်သောဖြစ်လာဆိုလိုတာကပုံမှန်ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြောင်းအရာတစ်ခုခုဖြစ်စဉ်းစားစော်ကားသော / အရှက်လူ့ဂုဏ်သိက္ခာကို။
ဒီလေ့လာမှုမှာရှိချိန်းတွေ့လူများ၏အမူအကျင့်မြင်ကွင်းများမှပေါ့ပေါ့တုံ့ပြန်မှုရှိသည်သောအငယ်တန်းအထက်တန်းကျောင်းမြီးကောင်ပေါက်များ၏ 67%, အများပြည်သူသောနေရာများအတွက်မြင်ကွင်းများနမ်းသည့်ဆပ်ပြာအော်ပရာပြပွဲဆန့်ကျင် 30%, မုဒိမ်းမှုရုပ်ရှင်မြင်ကွင်းတစ်ခုဆန့်ကျင် 14% ခဲ့ကြသည်, 12% SMPN ပင်ရှိပါသည် အခင်းဖြစ်ပွားရာသင်တန်းကိစ္စအဖြစ်အသေးစားကလေးများနှင့်အတူလိင်ပုံထင်တဲ့သူဆယ်ကျော်သက်။ ဤသည်ညစ်ညမ်းလွတ်လပ်စွာတည်ရှိကြောင်း Pontianak စံချိန်စံညွှန်းအတွက်အငယ်တန်းအထက်တန်းကျောင်းဆယ်ကျော်သက်များ၏အမြင်လျော့နည်းသွားခဲ့ပါသည်ပျံ့နှံ့နေတဲ့မူကြောင်းကိုဖော်ပြသည်။ ဤအခြေအနေကိုရလဒ်များလေ့လာမှု Zillman & Bryant (1982, Thornburgh & Herbert, 2002) မှထောက်ခံထားသည်။ တစ်စုံတစ် ဦး သည်အပြာစာပေရုပ်ပုံများနှင့်ထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့မိသောအခါ၎င်းတို့သည်အမျိုးသမီးများအပေါ်မခံစားနိုင်မှုပိုမိုများပြားလာခြင်းကိုပြသမည်ဖြစ်ပြီး၊ လိင်မှုကိစ္စနှင့်သွေဖည်ပြီးလက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုအဖွဲ့အစည်းအပေါ်ယုံကြည်မှုလျော့နည်းသွားသည့်အမြင်များရှိသည်။
နောက်ထပ် desensitization အဆင့်တွင် 22 ကလူကနေရှာတွေ့သည်ဤလေ့လာမှု၏ရလဒ်များကို7ကလူ (31.8%) actout ဇာတ်စင်၌ရှိကြ၏ကဲ့သို့အများအပြားတည်ရှိနေ။ ဒီအဆင့်မှာထိုကဲ့သို့သောသူအစစ်အမှန်အသက်အဘို့စောင့်ကြည့်လျက်ရှိသည်ညစ်ညမ်းအဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့သဘောထားရှိပါတယ်။ အစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက်အဆင့်တွင်အငယ်တန်းအထက်တန်းကျောင်းဆယ်ကျော်သက်တစ်ဦးစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာလိင် drive ကိုခံစားခဲ့ရသညျ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကြီးထွားဟော်မုန်း, Self-ရှာကြံအဆင့်အဖြစ်အမြင့်ဆုံးသိချင်စိတ်တစ်ခုအသိနှင့်အတူမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်ညစ်ညမ်းတဲ့အလတ်စားအောင်ဆယ်ကျော်သက်သည်သူ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ကနေ့စဉ်အခြေခံလိုအပ်ချက်တစ်ဦးချင်းစီသည်။ ညစ်ညမ်းမှ exposure ကိုမှန်ကန်အခြေအနေများအတွက်ထိုကဲ့သို့သောလိင် drive ကိုဖျော်ဖြေဖို့ဆယ်ကျော်သက်အစပျိုးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းအချက်များကလွှမ်းမိုးဖြစ်ပွားခဲ့ညစ်ညမ်းမှထိတွေ့မှု၏သက်ရောက်မှု၏ပြင်းအား။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း bivariate (chi စတုရန်း) အပေါ်အခြေခံပြီးထိတွေ့မှု၏သက်ရောက်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောသောအချက်များလိင်, လူတန်းစား, ထိတွေ့မှုအချိန်, ထိတွေ့မှုအကြိမ်ရေနှင့်အမျိုးအစားမီဒီယာများမှာရရှိခဲ့သည်။ multivariate ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရလဒ်များကိုအခြေခံပြီးကြီးစိုးအချက်များညစ်ညမ်းဖို့အကျိုးသက်ရောက်မှုထိတွေ့လိင်, လူတန်းစား, အချိန်ထိတွေ့မှုများနှင့်ထိတွေ့မှု၏ကြိမ်နှုန်းဖြစ်ပါတယ်ထိခိုက်စေသည်ဟုရရှိခဲ့သည်။ ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးငယ်များနဲ့နှိုင်းယှဉ်: ဤသုတေသနလုပ်ငန်းအတွက်ကြောင့်ဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးများ 1.98 ကြိမ် (95-1.08 3.63% CI) ၏ညစ်ညမ်းအန္တရာယ်နှင့်ထိတွေ့နေကြပုံရသည်။ မြီးကောင်ပေါက်များတွင်ဖြစ်ပေါ်ရသောထိတွေ့မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွက်ကွာခြားချက်များယောက်ျား SMPN နှင့်ဤမိန်းမသည်လိင်စိတ်ဖြစ်ပျက်တစ်ခုတိုးစေပါတယ်သောခြားနားချက်လိင်စိတ်နိုးထမှုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ လိင်စိတ်သို့မဟုတ်တပ်မက်သောစိတ်အဆုံးစွန်ရည်မှန်းချက်လိင်ဆက်ဆံနှင့်အတူဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ကိုယျခန်ဓာအဘို့အလိုရှိ၏။ အဆိုပါလိင်စိတ်စင်တာနှောက် cortex မှာတည်ရှိပြီး, ဒီလိင်စိတ်စတင်ခြင်း၏အချိန်မှာယောက်ျားနှင့်မိန်းမအကြားတစ်ဦးကိုမှန်ကန်ခြားနားချက်တည်ရှိ။ ဆွလည်းမရှိသည့်အခါအမျိုးသမီးတွေလိင်စိတ်အတွက်သဏ္ဌာန် (Widjaja, 2000) တွင်နှေးကွေးနေစဉ်အမျိုးသားများတွင်ပိုမိုလွယ်ကူစွာ, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွအဖြစ်အဘိဥာဏ်ဆွနှစ်ဦးစလုံးအော်ဂဇင်နှိုးဆော်ခြင်းများနှင့်ပိုမိုမြန်ဆန်။ ဒါကြောင့်လည်းရန်လိုသည့်အပြုအမူဦးနှောက်နှင့်ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်အတွင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့အထူးသဖြင့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆုံးဖြတ်ကြောင်းရှင်းပြရန်ကြိုးစားသောဇီဝသီအိုရီအရသိရသည်။ ဟော်မုန်းယောက်ျား (testosterone ဟော်မုန်း) တို့သညျပိုမို testosterone ဟော်မုန်း (Widjaja, 2000) ရှိပါတယ်ရှိရာရန်လိုရို၏သယ်ဆောင်ဖြစ်ဟုယုံကြည်နေကြသည်။ ထိုသို့အများစုကလိင်မြီးကောင်ပေါက်လူတို့ကျူးကျော်ဖြင့်အစပြုပြီးတော့သည်သူ၏ဆယ်ကျော်သက်သားမူကားယောက်ျား၏ကျူးကျော်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနိုင်ပါတယ်ဘယ်အရာကိုအတိုင်းအတာအထိဆုံးဖြတ်ရန်။ ဟော်မုန်းအခြေအနေများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ်ပေါက်ရေးအားပေးလိမ့်မည်ဟုဆန့်ကျင်ဘက်လိင်၏ tool ကိုလိင်တွေ့မြင်, ဆယ်ကျော်သက်, အထူးသဖြင့်ဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကြွဆေးအမြင်အာရုံ၏ပုံစံ, ထိတွေ့မှုတစ်ခုသို့မဟုတ်ရင်ခုန်စရာစာဖတ်ခြင်းကိုဖတ်ရှုခြင်းသို့မဟုတ်တစ်ရင်ခုန်စရာပုံရိပ်ကိုတွေ့မြင်နှင့်ဝသကဲ့သို့အမြင်အာရုံအသံတစ်ခုခုကိုဖို့ပိုအထိခိုက်မခံဖြစ်လာစေ အပြုအမူ။
ပထမဦးဆုံးအ-တန်းကျောင်းသူလေးထက်ထိတွေ့သက်ရောက်မှုညစ်ညမ်းကြုံတွေ့: နောက်ထပ်သုတေသန၏ရလဒ်များကိုအန္တရာယ် 2.4 အချိန်များတွင်ညစ်ညမ်းထိတွေ့မြီးကောင်ပေါက်တတိယတန်း SMPN (95-1.26 4,81% CI) ကဖော်ပြသည်။ ဇီဝပြန်လည်သုံးသပ်လိင်ဟော်မုန်းအန်ဒရိုဂျင်နှင့်အဓိကချို့ယွင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ဆိုလိုသည်မှာအသက် 11,12,13 နှစ်ပေါင်းရဲ့အစမှာစတင်တိုးမြှင့်မည်အသက်အရွယ် 14-18 နှစ်အသက်အရွယ် 19 နှစ်ပေါင်းအပေါ်လျှင်မြန်စွာတိုးမြှင့်ဖို့ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ် ie သည့်အခါဤအမှုကာလ၌ဆယ်ကျော်သက်ရွယ်ဖော်ပြထားကြောင်းသီအိုရီအရသိရသည် (Wiknjsastro, et al ။ , 1999) ။ အဆိုပါဟော်မုန်းလှုပ်ရှားမှုရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်နှင့်ပတ်သက်သောလူ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ ဒါဟာဟော်မုန်းသည်အခြားခန္ဓာကိုယ်ဟော်မုန်းတစ်ခုကွင်းဆက်တုံ့ပြန်မှုများ၏ဖြစ်ပျက်မှုထွက်လာပါတယ်အတွက်အလွန်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍနှင့်နောက်ဆုံးတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွနှင့်အတူအချို့သောဆက်စပ်အပြုအမူတွေကိုမွေးဖွားခဲ့ရတယ်။ pre-ဆယ်ကျော်သက်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမတူညီတဲ့အဆင့်ဆင့်ဟော်မုန်း၏တည်ရှိမှုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြောင်းအဖြစ်ကောင်းစွာဒေသခံလူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာသွင်ပြင်လက္ခဏာနှင့်ဆက်စပ်သောနိုင်ပါတယ်၏ညစ်ညမ်းမှထိတွေ့မှု၏ကွဲပြားခြားနားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများ၏ဖြစ်ပျက်မှုသော်လည်းမတစ်ဦးတည်းသာဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ရလဒ်အနေဖြင့်လည်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ထိတွေ့ခြင်းအသစ်သည်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံ၏ထိရောက်မှုအတွက်ပိုမိုကြီးမားသောအခွင့်အလမ်းများရရှိကြောင်းပြသနေသည်။ လွန်ခဲ့သောသုံးလကထက်ညစ်ညမ်းညစ်ညမ်းမှုပုံသဏ္exposureာန်နည်းပါးသောဆယ်ကျော်သက်များသည် ၃.၁ ကြိမ် (၉၅% CI: ၁.၆၁ မှ ၉.၉၈) တွင်အန္တရာယ်ရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ထိတွေ့မှုသုံးလကျော်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဆယ်ကျော်သက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက အသစ်နှင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောအာရုံစူးစိုက်မှုတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောအခြေအနေသည်လူတစ် ဦး ၏အာရုံစူးစိုက်မှုအတွင်းသို့ ၀ င်ရောက်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူပြီးလူတစ် ဦး ၏မှတ်ဉာဏ်သိုလှောင်မှုယန္တရား (Notoatmodjo, 3.1) ကိုအကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မည်။ ဒါ့အပြင်ဒီလေ့လာမှုမှာဆယ်ကျော်သက်များများမကြာခဏညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်ထိတွေ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ထိတွေ့မှု၏သက်ရောက်မှုများသာ။
ဤလေ့လာမှုတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ထိတွေ့မှုအကြိမ်ရေသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ထိတွေ့မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုအများဆုံးလွှမ်းမိုးသောအချက်ဖြစ်သည်။ ဆယ်ကျော်သက်များသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများ (တစ်ပတ်တစ်ကြိမ်ထက်ပိုသို့မဟုတ်ညီမျှသည်) နှင့်မကြာခဏထိတွေ့မှုအကြိမ် ၅.၀ ကြိမ် (5.0% CI: 95-1.39) တွင်တွေ့ရခဲသောဆယ်ကျော်သက်များနှင့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်တစ်ကြိမ်တစ်ခါထက်နည်းသောထိတွေ့မှုများကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ ဤအခြေအနေသည်သဘာ ၀ သညာ၏သီအိုရီအရထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုဖော်ပြထားသည်။ ဆယ်ကျော်သက်များအတွက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံသည်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပိုမိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေမီဒီယာများသည်လိင်မှုဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုထပ်ခါတလဲလဲပြောဆိုခြင်းဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ဤလေ့လာမှုတွင်ဆယ်ကျော်သက်များကြုံတွေ့ခဲ့ရသောထိတွေ့မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလည်းစွဲလမ်းသည် (စွဲ) သည်။ တစ်စုံတစ် ဦး ကအထူးသဖြင့်ထိတွေ့မှုအရေအတွက်နှင့်အကြိမ်ရေအရမြင့်တက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ စွဲလမ်းစေခဲ့သည်။ တစ်စုံတစ် ဦး သည်မကြာခဏညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ထိတွေ့မိပါကသူသည်တိကျသောလုပ်ဆောင်မှုများပြုလုပ်ရန်လျင်မြန်စွာနှိုးဆွလိမ့်မည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုအဆက်မပြတ်ကုသပါကခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းသည်“ ပျက်စီးခြင်း” ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုနေ့စဉ်ဘာသာစကားတွင်ပြောနိုင်သည် (Sarwono, 18.09) ။ လူတစ် ဦး သည်ရံဖန်ရံခါ MMSM (Content Highlighting လိင်မီဒီယာ) ကိုစားသုံးပါကအကျိုးသက်ရောက်မှုသည်အလွန်ကြီးလွန်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ လူများသည် MMSM ကိုအဆက်မပြတ်စားသုံးရန်တွန်းအားပေးသောအခါလိင်မှုကိစ္စသည်အလိုရှိရာလမ်းကြောင်းသို့လမ်းကြောင်းကိုတိုးလာစေလိမ့်မည်။ လူငယ်ဇာတ်လမ်းများအင်ဒိုနီးရှား, 1999) ။
bivariate ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု၏ရလဒ် (chi square) ၏ရလဒ်သည်ဆယ်ကျော်သက် SMPN များသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုမီဒီယာပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ထိတွေ့ခြင်းအားဖြင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ထိတွေ့မှု၏ဆိုးကျိုးများအတွက် ၄.၂၁ ဆ ပိုမို၍ ပုံနှိပ်မီဒီယာမှတစ်ဆင့်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများနှင့်ထိတွေ့ကြောင်းပြသသည်။ သတင်းမီဒီယာ (အီလက်ထရောနစ်မီဒီယာသို့မဟုတ်ပုံနှိပ်မီဒီယာ) သည်နေရာဒေသများစွာရှိလူများအားသတင်းစကားကိုဖြန့်ဝေနိုင်ပြီးစွမ်းအားအရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်သည်။ ပါတီများကို အသုံးပြု၍ ပါတီကိုအသုံးပြုခဲ့သည် (Rivers & Jensen, 4.21) ။
Wibowo (2004) ကမိုးကုပ်စက်ဝိုင်းနှင့်အသိပညာကိုထပ်တိုးအပြင်ဤအချက်အလက်ကိုလည်းမူရင်းအချက်အလက်များ၏တိုင်းပြည်များ၏တန်ဖိုးများကိုသယ်ဆောင်သောကြောင့်, အစုလိုက်အပြုံလိုက်မီဒီယာအီလက်ထရွန်းနစ်နှင့်ပုံနှိပ်မီဒီယာ, ဆယ်ကျော်သက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်ထဲမှာသေးငယ်တဲ့မအခန်းကဏ္ဍဖော်ပြထားသည်။ Rachmat (၁၉၉၅) ကလည်းထုတ်ဝေသောမဂ္ဂဇင်းများ၊ စာအုပ်များ၊ “ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများ” ဟုခေါ်သည့်သမားရိုးကျလှုံ့ဆော်သည့်ရုပ်ပုံများပါသောပုံနှိပ်မီဒီယာသို့မဟုတ် SEM (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရရှင်းလင်းသောပစ္စည်းများ) ဟုလည်းခေါ်သည်၊ ပုံမှန်ရုပ်ပုံထက်။ မီဒီယာညစ်ညမ်းသို့မဟုတ် SEM သို့မဟုတ် erotica, နက်ရှိုင်းခေါ်ဆောင်သွားပါဝင်ပစ္စည်းများရုပ်မြင်သံကြား, ရုပ်ရှင်များ, မဂ္ဂဇင်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်အားထက်သန်မှုကိုလှုံ့ဆော်ကြောင်းစာအုပ်များ, ကိုယ်ကျင့်တရားတန်ဖိုးများကိုထိခိုက်စေ, လိင်-အရူးကလူအားပေးသို့မဟုတ်မုဒိမ်းကျင့် (Bungin, 1981 အတွက် Tan က 2001) မြှင့်တင်ရန်။
လူမှုလေ့လာမှုသီအိုရီအရ Bandura (၁၉၇၁ Tornburg & Lin၊ ၂၀၀၂) မှဆယ်ကျော်သက်များသည်မီဒီယာများမှဖော်ပြသောလေ့လာမှု၏လိင်အကြောင်းလေ့လာနိုင်သည်ဟုဖော်ပြသည်။ သင်တန်းသားများကိုစိတ်ဝင်စားဖြစ်လာသည့်အခါတပ်မက်မှုကိုလှုံ့ဆော်တဲ့မီဒီယာ hidden မက်ဆေ့ခ်ျလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုသို့မဟုတ်ဇာတ်ကောင်တစ်ဦးဆယ်ကျော်သက်အဖြစ်သတ်မှတ်ဖေါ်ပြတင်ဆက်ထားပါတယ်အတော်ကြာအခြားနည်းလမ်းလမ်းကြောင်းနှင့်အတူတင်ပြခွန်အားနှင့်ပြည့်ဝ၏ကြောင်းအရာအဖြစ်ဖော်ပြ, ခိုင်ခံ့ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
အနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှု။ မိုဘိုင်းဖုန်းများ watched ဖြစ်နိုင်မစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုညစ်ညမ်းပုံရိပ်များနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီကတခြားကို SMS / MMS ကိုပေးပို့ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုလဲလှယ်သတင်းအချက်အလက်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်တိုးတက်မှုတစ်ခုမှာအင်တာနက်မှတဆင့်ဆယ်ကျော်သက်များအတွက်အလွန်ကျယ်ပြန့်စွာနှင့်လွတ်လပ်စွာအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဒါဟာပိုမိုလွယ်ကူဆယ်ကျော်သက်ရရှိရန်စေသည် တစ်ဦး, လွယ်ကူသောစျေးသိပ်မကြီးတဲ့ခြင်းနှင့်လမ်းအတွက်ညစ်ညမ်းမှထိတွေ့မှု
privacy ကို။ မိဘများညစ်ညမ်းနှင့်အတူထိတွေ့သည်သူ၏ဆယ်ကျော်သက်စောင့်ရှောက်ရန်အဘို့အပြောင်းပြန်အလွန်ခက်ခဲ။ အဆိုပါ BKKBN အစီရင်ခံစာ (2004) ခုနှစ်တွင်, (2007) ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောင်ဒေးရှင်းနှင့် Buah Hati ၏သုတေသနရလဒ်များသားသမီးများ၏ 80% Jabodetabek ဧရိယာ၌ 9-12 နှစ်ပေါင်းအသက်ကြောင်းဖော်ပြထားသောအင်တာနက်ကနေတဆင့်ပစ္စည်းညစ်ညမ်းဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, 2007 အတွက်မြို့ငါးမြို့အတွက်လေ့လာမှု PKBI (2001) ၏ရလဒ်များကိုအမည်ရ Kupang, Palembang, Singkawang, Cirebon နှင့် Tasikmalaya မီဒီယာညစ်ညမ်းလုံးဝအသုံးဖြေဆိုသူ 61.64% ပြသခဲ့သည်။ ဤအရာအဖြစ်အများအပြား 70.59% ရုပ်ရှင် (VCD ကို) ကိုသုံးပေမယ့်လည်းမဂ္ဂဇင်းများ, ဓါတ်ပုံများနှင့်အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုထားတဲ့တည်ရှိ။
83.3 စုစုပေါင်း Pontianak စီးတီးအတွက်အငယ်တန်းအထက်တန်းကျောင်းမြီးကောင်ပေါက်များ၏% ညစ်ညမ်းထိတွေ့နှင့် 79.5 အဖြစ်အများအပြားအဖြစ်ထိတွေ့ခံရခြင်းမှ% ညစ်ညမ်းထိတွေ့၏ဆိုးကျိုးများတွေ့ကြုံခံစားကြပြီ။ ညစ်ညမ်းမှ 19.8% 69.2% ၏တင်းမာမှုဟာ desensitization ဇာတ်စင်မှာအရာမှ၎င်းငျး, 61.1% desensitization မှစ. , 31.8% စွဲအဆိုပါတင်းမာမှုဇာတ်စင်မှာမြီးကောင်ပေါက် မှစ. , စွဲဇာတ်စင်ရှိကြ၏သလောက်ထိတွေ့မှု၏ဆိုးကျိုးများတွေ့ကြုံခံစားတဲ့သူဆယ်ကျော်သက် လုပ်ရပ်ထွက်၏စင်မြင့်မှာခဲ့ပါတယ်။ Pontianak အတွက်အငယ်တန်းအထက်တန်းကျောင်းထိတွေ့ညစ်ညမ်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုထိခိုက်ကြောင်းကြီးစိုးအချက်များကျား, မ (အထီး), အတန်းအစား (သုံး), ထိတွေ့မှုအချိန် (အသစ်) နှင့်ထိတွေ့မှု၏ကြိမ်နှုန်း (မကြာခဏ) ဖြစ်ပါသည်။ frequency ထိတွေ့မှု (မကြာခဏ) ကိုအများဆုံးဃအချက်ဖြစ်ပါသည်.
အကြံပြုချက်။ အထူးသဖြင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များ၌အန္တရာယ်ရှိသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများအထူးသဖြင့်မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး၊ ဤသတင်းအချက်အလက်များကိုသင့်လျော်သောနည်းလမ်းနှင့်ကျွမ်းကျင်စွာပို့ဆောင်သင့်သည်။ ပိုမိုများပြားသောမျိုးပွားကျန်းမာရေးအစီအစဉ်သည်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးကြိုးပမ်းမှုများကိုထိမိပြီးကျောင်းအဆင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကျောင်းသားများအားမျိုးပွားမှုဆိုင်ရာကျန်းမာရေးပြaboutနာများနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုပုံမှန်ပေးခြင်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာတိုးတက်မှုများရှိသော်င်ဆယ်ကျော်သက်များ၏မျိုးပွားမှုကိုကျန်းမာရေးပြissuesနာများအပေါ်မီဒီယာညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံ၏သက်ရောက်မှုပမာဏနှင့် ပတ်သက်၍ မိဘ၏နားလည်မှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ ထိတွေ့ခြင်းခံရသည့်ဆယ်ကျော်သက်များသည်ကျန်းမာရေးနှင့်အန္တရယ်ကင်းစွာဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ရေးအတွက်သုတေသနပိုလုပ်ရန်လိုသည်။